विचार/ब्लग « Today Khabar
महिला पत्रकारको चर्तिकला र एनजीओको खेती
– बिशाखा केही महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा महिला पत्रकार सम्बन्धि एनजिओ चलाउने संस्थाकि अध्यक्ष शर्मा थरकी एक वरिष्ठ महिला पत्रकारले तालिममा सहभागि एक महिला पत्रकारको पारिवारिक खोजविन गर्दै उनको आमाको उमेर
सन्दर्भः राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस
–भीष्मराज ओझा काठमाडौँ, १५ पुस । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समृद्धि मेलमिलापबाट मात्रै सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने भन्दै नेपाली काँग्रेसले अवलम्बन गरेको मेलमिलापको नीतिको अपरिहार्यता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकाले बुधबार
महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रेत
राजेन्द्र महर्जन पुस १४ – कवि-समालोचक संगीत श्रोताको एउटा विचारोत्तेजक कविताको शीर्षक हो, ‘मोदनाथ प्रश्रतिको ठेगाना खोज्दै हिंँडेका पृथ्वीनारायण शाहका प्रेतहरू ।’ कीर्तिपुर, पाँगा दोबाटोमा अचानक भेटिएका महाराज पृथ्वीनारायण शाहले
कलियुगका ‘कालीदास’जीलाई खुल्ला पत्र
खेमनारायण यादव (राहुल) कालीदास जी ! पुषको चिसो÷जाडोमा न्यानो अभिवादन, मेरो त्यो दिनको खराब राशीको कारण हो कि त्यो दिन त्यस्तै हुन लेखेर हो ! मिति २०७१ पुस ७ गतेको
रक्षा भन्दै छ, कस्ले गर्ला मेरो रक्षा ? (फोटो कथा)
सार्कको रमझमले नछोएको सिंहदरबारको कथा । काठमाडौं, ११ पुस । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको एक महिना बितेछ । तर सार्कले छोडेका काठमाडौंका केहि परिदृश्यहरु अझै ताजै
कट्टरपंथी समूहको निसानामा अबोध बालबालिका
विनोदप्रसाद अधिकारी काठमाडौं, ९ पुस । पाकिस्तानको पेशावर शहरमा १ सय ३२ विद्यार्थीसहित १ सय ४२ जनाले ज्यान लिनेगरि भएको आतंककारी हमलाले बुधबार एक साता पुरा गरेको छ । यो
नेकपा माओवादी पुनर्गठनको आवश्यकता
उदयबहादुर चलाउने (दीपक) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को नेतृत्वमा नेकपा माओवादी जब पुनर्गठित भयो, तब नेपाली राजनीतिमा बहसको एउटा नयाँ तरंग शुरु भएको छ । विभिन्न कोण प्रतिकोणाट तर्क वितर्क शुरु भएका
डा. बाबुराम भट्टराईको आँखामा सामाजिक सञ्जाल
काठमाडौं, ५ पौष । पूर्वप्रधानमन्त्री, एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा बढि रुचाइनुभएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले फेसबुक
समस्या : घर धनी र डेरावालको
निरन्जन पौडेल– कुश्मा, पर्वत घर कसको हो ? यो प्रश्न निकै गम्भिर छ । रहस्य खोतल्ने हो भने घर कसैको होइनन् तर भनिन्छ, सबैका हुन् । यी घरमा बस्ने मानिसहरू